1978 मा बिक्री मा पहिलो पुस्ता मित्सुबिशी L200 छनोट-अप ट्रक बाँकी। एक वर्ष पछि, कार "यस वर्षको सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी ट्रक।" जित्यो अर्को पुस्ता पनि मित्सुबिशी L200 1996 मा आए।
यो मोडेल तीन संस्करण मा उपलब्ध छ:
1 एकल टैक्सी 2-seater सानो घर र कार्गो लागि विश्वसनीय मंच संग पूर्ण-लम्बाइ।
चार सिट गर्न सहज सिट मात्र दुई पङ्क्ति थियो जो दुई-ढोका सैलून संग 2. क्लब टैक्सी।
4 व्यक्तिका लागि सहज सिट दुई पङ्क्ति संग चार-ढोका सैलून संग 3. डबल टैक्सी।
साथै, प्रत्येक संस्करण हुन र पछिल्लो, र एक साथ गर्न सक्नुहुन्छ अगाडि-पाङ्ग्रा ड्राइव।
Matsubisi L200 बन्द-सडक लागि डिजाइन गरिएको छ। राम्रो patency को विशेषताहरु - imposing लामो-यात्रा निलम्बन र विशाल पाङ्ग्रा उच्च जमीन अवकास। ट्युनिङ मित्सुबिशी L200 एकदम कार को ड्राइभिङ प्रदर्शन सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। भित्री तल्ला एक पचास सेन्टिमिटर मा जमीन माथि उठाएको छ। तसर्थ, वाहन मा सजिलो प्रविष्टि लागि footrest (केवल एक अतिरिक्त। विकल्प रूपमा) प्रदान गरिएको छ।
भित्री मित्सुबिशी L200 एक सरल र austere, रंग खैरो को रंग हुन्छन्। अगाडि प्यानल स्पष्ट गर्न र प्रयोग गर्न सजिलो छ। त्यहाँ गति नाप्ने यन्त्र, tachometer, तापमान संकेतक कूलेंट (अर्थात्, कूलेंट) र इन्धन स्तर thereon। को GLS ब्लक संस्करण बाहिर हावा तापमान गेज, inclinometer र वाल्टमीटर संग थप साधन छ। कुर्सियों spokes दुई जोडी दुई समायोजन र स्टेरिड़ उचाइ मा समायोजित गर्न सकिन्छ छ।
एक सय र Losch को turbodiesel क्षमता - रूस मा ले ले जाना मात्र एक आन्तरिक दहन इन्जिन संग आउनुहोस्। शक्ति (वा प्रति मिनेट 4000 क्रांतियों) र 2,400 लिटर एक मात्रा। धूम्रपान समय 2000 RPM सम्म पुग्न सक्दैन।
पछिल्लो-पाङ्ग्रा ड्राइव, चार-पाङ्ग्रा ड्राइव, चरण-तल को एक श्रृंखला संग ड्राइव: सुरुङ मा मित्सुबिशी L200 एक पाँच-गति मार्गदर्शन प्रसारण र सञ्चालनको एक लीवर स्विच प्रकार स्थित।
पेट्रोल र डिजेल इन्जिन, वायुमण्डलीय, र पछिल्लो-पाङ्ग्रा ड्राइव संस्करण र रूसी संघ मा स्वचालित मीटर को मोडेल मिसिन आपूर्ति छैन।
दोस्रो पङ्क्तिमा किनभने खुट्टा लागि कम छत र साना स्पेस अग्लो मान्छे बस्न असहज हुनेछ। साथै, त्यहाँ कतै सानो कुरा राख्न, कुनै खल्ती छ किनभने छ। अझै मुख्य प्लस मित्सुबिशी L200 - यसको throughput र बहुमुखी प्रतिभा छ। यो कार एक टन सम्म वजन कार्गो बोक्न सक्छ। कार्गो खाडी कठोर पक्ष पर्खालहरु मा। यो लामो समय भार बोक्न गर्न सम्भव हुन्छ भनेर पछिल्लो ढोका, एक तेर्सो स्थिति जोडेको गर्न सकिन्छ।
मित्सुबिशी L200 को नवीनतम पीढी 2006 मा जारी भएको थियो। डिजाइन एकदम बदल थियो, कार एक थप चिल्लो सुविधाहरू, आधुनिक र पुरुष नजर छ। सैलून थप आधुनिक भएको छ, र यात्रु वृद्धि स्पेस खर्च मा फिर्ता पंक्ति मा थप सहज भयो। तर मित्सुबिशी L200 संग भयो कि प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण परिवर्तन - एक परिमार्जन सबै-पाङ्ग्रा ड्राइव प्रसारण छ। यसको मदत पाएर तपाईं प्रति घण्टा एक सय किलोमिटर सम्म सवारी चलाउँदा सबै पाङ्ग्राहरू को ड्राइव मोडमा अर्थव्यवस्था मोड देखि स्विच गर्न सक्नुहुन्छ।
मित्सुबिशी L200: कार मालिक को समीक्षा
पेशेवरों: राम्रो permeability, भित्री spaciousness, ठूलो कार्गो अन्तरिक्ष (फिर्ता, तपाईंले सजिलै एक मानक यूरो चटाई राख्न सक्छ), राम्रो उच्च-टोक इन्जिन, एक अपेक्षाकृत सस्ती मर्मत, सुरक्षा
विपक्ष: आराम, गरिब इन्सुलेशन।
नेटवर्क डाटा मोडेल